Nohamorain’i Etazonia Indray Ny Fanaovan’i Kremlin Propagandy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2014 18:04 GMT
Tsara kokoa ny naka fahanginana kely taorian'ny tsy fahombiazan'ny diplaomasian'i Etazonia tamin'ny fifandraisana tamin'ny Rosiana olotsotra [tatitra Global Voices amin'ny teny malagasy], rehefa tojo tsy fahombiazana miharihary tahaka izao ny teorian'ny tsikombakomba. Ilay mpisera Twitter @Dikuschka no voalohany nisarika ny fifantohana [ru] tamin'ny “fangatahana hanao tolotra” [ru] fananganana sekoly Okraniana iray nataon'ny governemantan'i Etazonia nandritra ny fotoanan'ny mihintsan-dravina farany teo. Tsy dia misy inona loatra, ankoatra ny hoe io sekoly resahina io dia any Sevastopol, misy ny tobin-tafika an-dranomasin'i Rosia ao amin'ny ranomasina mainty. Ary ny fangatahana dia avy amin'ny Komandin'ny Jenia Miaramilan'i US Navy.
Mampiahiahy tokoa izany fitambaran-javatra izany, ary ampy ho an'ny mpisera [ru] twitter [ru] pro-Kremlin ny mamadika mora ny fananganana indray ny sekoly iray eo ambany fandaharan'asam-panampiana mahaolona an'ny komandin'i Etazonia ao Eoropa, ho “fananganana ny tobin-tafika an-dranomasina Etazonia.” Nanavatsava ny RuNet ny kisarisarim-pampihomehezana, nandalo ny haba-tranonkalam-pampihomehy tahaka ny Pikabu [ru], gazety tahaka ny Komsomolskaya Pravda [ru], eny fa na dia ny kaonty Twitter (hosoka) an'ny mpitarika an'i Krimea Sergey Aksyonov aza (naato moa io kaonty io amin'izao fotoana izao).